Farmaajo Oo Khayre Ku Taageeray Inaan Doorashada Dib Loo Dhigin | Gaaroodi News
Ra’iisul Wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka hadlay waxyeellada ka dhalan karta muddo kororsi ay sameysato dowladda.
Khayre oo maanta guddoomiyay shirka golaha wasiirrada oo looga hadlay doorashada 2020-2021, ayaa caddeeyay mowqifkiisa, isagoo sheegay “inuusan oggolaan doonin muddo kordhin, doorashaduna ay xilligeeda ku dhici doonto”.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay fahansan tahay muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo waqtiga doorashada iyo in loo hoggaansamo dastuurka.
Sidoo kale wuxuu hoosta ka xarriiqay in kalsoonida shacabka ay muhiimad weyn leedahay. Dhammaan xubnaha golaha wasiirrada ee goob joogga ka ahaa kulankaas ayaa isku waafaqay inay si wadajir ah uga shaqeeyaan dardar galinta howlaha doorashada.
Farmaajo oo soo dhaweeyay go’aanka golaha wasiirrada
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay baaqa Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee ku aaddan in doorashada soo socota ay ku qabsoonto waqtigeeda.Madaxweynaha ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii xoojinta dimuqraadiyadda dalka iyo in la sii horumariyo hannaanka doorasho, iyada oo mar walba awoodda loo sii dhaweynayo shacabka Soomaaliyeed.Farmaajo ayaa sidoo kale tilmaamay sida ay lagama maarmaan u tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin, lana hirgaliyo doorasho waafaqsan Dastuurka iyo Sharciga Doorashooyinka, kuna dhacda jawi midnimo, wadatashi iyo isqancin.
Muddooyinkana wuxuu muran ka taagnaa sida ay doorashada Soomaaliya u waafaqi karto waqtigii loogu talagalay, iyadoo dhinacyada mucaaradkana ay walaac ka muujinayeen muddo kororsi ay sameysato dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Noocyada doorasho ee suuragalka ah Xaliimo Yareey, Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Soomaaliya
“Labadaba waxaan u baahannahay in sharcigooda aan haysano illaa bisha July (ee sannadkan),” ayey hadalka ku dartay. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu doortay codeyn bishii September ee 2012-kii ka dhacday Muqdisho ka dib doorashada oo sannad iyo wax la jira dib u dhacday, wuxuuna xilka kala wareegay Sheekh Shariif.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka tirsan hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa si weyn u dhaliilay hadalka guddoomiyaha doorashada.
“Lagama sugeyn marna muddo kordhin iyo abuurid mugdi siyaaseed oo hor leh in dalka uu guddiigii madaxa bannaanaa ee dastuuriga ahaa oo umadda Soomaaliyeed kalsoonida ay siisay in ay baarlamaanka la hor yimaadaan,” ayuu yiri.
Sidoo kale Cabdiraxman Cabdi Shakuur oo ah siyaasi mucaarad ah ayaa yiri: “In khudbada Guddiga Doorashooyinka ay muddo kordhin ku soo idlaanayso horaan u ogayn. Mar haddii masuuliyadii loo igmaday ay ka soo bixi waayeen, hal wado ayaa GMDQ u furan, intii ay dalka qalalaase gelin lahaayeen, in ay is casilaan”.